एमाले अध्यक्ष ओलीले जनयुद्ध स्विकारे : प्रचण्ड - Naya Patrika
एमाले अध्यक्ष ओलीले जनयुद्ध स्विकारे : प्रचण्ड
सन्तोष भट्टराई/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २ फागुन | फागुन ०२, २०७४
जनयुद्ध दिवसमा बेग्लाबेग्लै कार्यक्रम –
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएको बताएका छन् । २३औँ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा उनले माओवादी जनयुद्धले नै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, समुदायको अधिकार संविधानमा स्थापित भएको बताए ।
प्रचण्डले अबको यात्रा समाजवाद भएको र समाजवादी राज्य स्थापनाका लागि सम्पूर्ण कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आउनुपर्ने पनि बताए । उनले इतिहासको आवश्यकतालाई बोध गरेर पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको खुलासा गरे पनि कुन मोडालिटीमा एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भन्ने विषय खुलाएनन् ।
ओलीले जनयुद्ध स्विकारिसके
प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी जनयुद्धलाई स्विकारिसकेको बताए । ‘एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले के कुराको महत्व स्विकार्नुभएको छ भने नेपालको सामाजिक, राजनीतिक जागरणमा जनयुद्धको ऐतिहासिक भूमिका थियो र छ,’ उनले अघि भने, ‘र, जनयुद्ध दिवसकै दिन पार्टी एकतालाई टुंग्याउन सकियो भने हामीलाई खुसी लाग्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । हाम्रो कोसिस छ, सकेसम्म आज नै टुंगोमा पुगोस् । र, सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादीको चुनौती नेपालबाट हटाउन सकियोस् ।’
वैद्य र विप्लवमाथि कटाक्ष
प्रचण्डले पूर्वसहकर्मी विप्लव र मोहन वैद्य किरणप्रति कटाक्ष गरे । उनले भने, ‘मेरो गुरु भएर परिचित हुनुभएका कमरेड किरण ! द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के हो ? किताबमा पढ्नका लागि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद धेरैले लेखे र पढे । जीवनमा द्वन्द्वात्कम भौतिकवाद लागू गर्ने के चिज हो भन्ने कुरा रियलाइज गरेर जनता जहाँ छन् त्यहाँ जाने हो ।’
उनले देशमा समाजवादी सत्ता स्थापनका लागि ठूलो दायरा, धेरै जनता र धेरै कार्यकर्ताको आवश्यकता परेको बताए । प्रचण्डले समाजवादका लागि मलिलो जमिन चाहिएको र त्यसका निम्ति नेपालका सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आउनुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव दिवा सपनामा रहेकाले त्यसबाट ब्युँझिन आग्रह गरे । उनले वैद्य र विप्लव वाम एकतामा सामेल नभए जनताविरोधी हुने पनि बताए ।
वैद्य र विप्लवको छुट्टै कार्यक्रम
क्रान्तिकारी माओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २३औँ जनयुद्ध दिवस संयुक्त रूपमा मनाएका छन् । पार्टी एकतासम्म गर्ने उद्घोष गरेका दुई पार्टीले जनयुद्ध दिवस संयुक्त रूपमा मनाएका हुन् । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव किरणले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले जनयुद्ध र जनतालाई धोका दिइसकेको बताए ।
कार्यक्रमा उनले एमाले—माओवादीको वाम गठबन्धनले पुरानै राज्यसत्ता फर्काउन लागेको र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेको बताए । एमाले र माओवादी कम्युनिस्ट नभई दक्षिणपन्थी भएकाले क्रान्तिको नेतृत्व गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । जनवादी व्यवस्थाको स्थापनार्थ क्रान्ति गर्ने वैद्यले बताए ।